Filoha Andry Rajoelina - Takiako ny hisian'ny Fitsarana marina tsy mitanila - Ary tsy ekeko ny fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana- Inona no vaovao du 21 janvier 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Corruption Madagascar Filoha Andry Rajoelina – Takiako ny hisian’ny Fitsarana marina tsy mitanila...
Filoha Andry Rajoelina – Takiako ny hisian’ny Fitsarana marina tsy mitanila – Ary tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaham-pitsarana- Inona no vaovao du 21 janvier 2019
Nahavelom-panantenana ny vahoaka Malagasy rehetra ny lahateny nataon’nyFilohampirenena Andry Rajoelina omaly taorian’ny fahavitan’ny fihanianany tetsyMahamasina. Hentitra sady mafonja, izay raha fehezina ny kabary nataony. Lahatenymifototra tamin’ny zavamisy marina niainana, ary iainana eto amin’ny firenena izany fa tsytoy ireo kabary misavaon-danitra. Mazava ny tenin’ny Filohampirenena, fa « haverintsika nyhasin’ny tany tan-dalàna » tsy hisy intsony manomboka eto ny olona ambon’ny Lalàna na iza,na iza izy. Nitodika tany amin’ireo mpiasam-panjakana, (mpiasam-bahoaka) ny Filohanandritra ny lahateniny, « Mba tena hiasa ho an’ny vahoka ny mpiasam-panjakana », hoyizy,ho fanaraha-maso izany, hisy ny fametrahana sampandraharaha manokana eny anivon’nyFiadidiana ny Repoblika, handray fitarainana ny vahoaka. Ny « fitarainana voaray tsy avelaho very hanjavony fa tsy maintsy hanaovana fanadiadihana », hoy hatrany ny voalazany.Sambany no hisy fandraisana fitarainana mivantana avy any amin’ny vahoka tahaka izany tetoamintsika. Notsindrin’ny Filoha mafy fa « tsy azo ekena mitsy ny fanararotam-pahefana mbahoentina hakana tombotsoa manokana ». Tsy ekeko ny gaboraraka hoy izy, tsy ekeko nyfandanindanim-poana ny volam-panjakana. Naveriny indroa tao anaty lahateniny mitsy nyhoe « tsy azo ekena ny fanaovana tolotr’asa tsy misy asa tanterahina akory ». Ity farany mantsydia zary lasa fomba fanao tamin’ireo Fitondrana teo aloha niofandimby ka nisy mihintsy ireotompon’andraikitra lasa miliardera noho izany fomba fanao mambotry firenena izany.Nanamafy hatrany izy fa « tsy azo ekena ny fanodikodinana volam-panjakana fa ho hentitraary ho henjana ny sary ho an’izay tratra manao an’izay ». Ataoko laharam-pahamehana nyady amin’ny kolikoly, hoy izy nanohy ary takiko ny hisian’ny Fitsarana marina tsy mitanila,hatokisan’ny vahoaka. Ary tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaham-pitsarana. Olanalehibe eto amin’ny Firenena ny tsy fandriampahalemana. Naverin’ny Filohampirenenatamin’ny lahateny indray fa mampiaikaika ny vahoaka ny fandriampahalemana ka hisyvahaolana manokana. « Hampitomboana ny isan’ny mpitandro ny filaminanna manerana nyNosy. Vatsiana fitaovana maoderina sy manaraka ny toetrandro izy ireo mba horeharehantsika izany Foloalindahy Malagasy izany ». Araka ny teniny. Efa nampiseho nyfahavononany niasa sahady ny Filoha, ka ho fisantarana izany dia efa naseho tamin’nyvahoaka ireo santionan’ny fiara tsy laitram-bala afaka miakatra tendrombohitra ary afakamandeha anaty rano nomena ny mpitandro ny filaminana. Nampita hafatra mafonja ho an’nyFoloalindahy ny Filoha, « ho anareo Foloalindahy sy ny tompon’andraikitra ao aminy diamitaky fitondrantena mendrika aho fa ho henjana ny sazy raha misy mpitandro ny filaminanamanararao-pahefana, manao herisetra sy mampijaly ny mpiray tanindrazana na miraytsikombakomba amin’ireo olon-dratsy”.Asa fa tsy kabary.Tsy miandry ela ny fampandrosoana fa avy hatrany dia vavany. Mba hahafahanamanatenteraka ireo velirano nifanaovana tamin’ny vahoaka, dia nomen’ny Filoha lanjamanokana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Hisy ny fanovana rafitra noho izany ka hapetrakany Governora isam-paritra. « Omena lanja manokana ny Governor any Faritra kahiandriakitra mivantana ny tetikasa fampandrosoana. Izy ireo no hitarika ny fanamboaranafotodrafitrasa sy ny asa fampandrosoana nampanantenana. Omena fitaovana manokanaalohan’ny hankalazana ny fiverenan’ny Fetim-pirenena », arak any nambarany hatrany. IreoGovernora ireo izany no tena hanatanteraka ny vina IEM ary ho isan’ireo tompon’andraikitrahanana andraikitra ny asa goavana. Mba hampahomby azy ireo amin’ny asa sahaniny diahiaraka « hivory amin’ny Filoha indray mandeha isam-bolana na isaky ny roa volana izy ireo”. Apetraka ny fanamby, hoy ny Filoha Aandry Rajoelina fa tsy maintsy mahazo izaysahaza azy ny Faritra rehetra manerana ny Nosy. Ho tohin’izay, nambarany hatrany fa hisy nyfanamboarana orinasa isaky ny Renivohi-paritany ka tsy hanafatra foana isika fa mbahanondrana amin’izay. Ho laharam-pahamehana ny « politikan’ny kibo » ka hampitomboanany velaran-tany hambolena ary hisy fanomezana fitaovana ho an’ny tantsaha. Miainga avyany ambony ohatra, hoy ny fomba fiteny. Mametraka fanamby ny Filoha Andry Rajoelina fahamerin-kasina izany toerana maha Filohampirenena izany, araka izay nambarany fa »Haverina ny hasin’ny Filohan’ny Repoblika, ho Filohan’ny Repoblika mendrika ny vahoakaMalagasy, hijoro Raiamandreny ary hihaino ny feon’ny vahoaka ary ho eo akaikin’nyvahoaka mandrakariva ny tenako ».
SEM Andry Rajoelina – Takiako ny hisian’ny fitsarana marina eto Madagasikara – 19 janoary 2019
Article précédentZava-bitan’i Harimisa Norovolona teo amin’ny tontolon’i Fitsarana tao anatin’ny fito volana – TVM 19 janoary 2019
Article suivantD’après SEM Andry RAJOELINA, retour de l’état de droit à travers la lutte contre la corruption et l’indépendance de la Justice – Les nouvelles du 21 janvier 2019
Barons du HVM en prison – Parité homme-femme – La gazette...